Isifunda esimangazayo saseSanta Denis eParis | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | EFrance, EParis
IParis ingenye yezinhloko-dolobha ezinkulu zabavakashi zomhlaba futhi kuthatha uhambo olungaphezu kolulodwa ukuyithola.
Inamakhona amaningi, iminyuziyamu eminingi, izindawo zokudlela eziningi nezindawo ezithakazelisayo ongazivakashela nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Elinye lamaphethelo alo yi Sain-Denis, etholakala ngaphansi nje kwekhilomitha ukusuka enkabeni yenhloko-dolobha yaseFrance.
2 Ungafika kanjani eSaint-Denis
3 Yini ongayibona eSaint-Denis
4 Impilo yasebusuku eSaint-Denis
USaint-Denis unjalo idolobha elisenyakatho neParis idume phakathi kwabavakashi ngokuba ne I-Basilica yaseSaint Denis lapho kuphumula khona amakhosi amaningana aseFrance futhi ngoba futhi lapho kukhona iStade de France edumile, inkundla yebhola lombhoxo.
Saint-Denis inomsuka wamaGallic waseRoma, Kepha ngenkathi ukusabalala kobuKrestu kula mazwe kuphonsa abafelukholo bokuqala, umlando wawo uthathe ithuba lapho umbhishobhi wokuqala waseParis, uSanta Denis, engcwatshwa lapha ngemuva kokubulawa kwakhe eMontmartre.
I-abbey yangenkathi ephakathi yalelo gama yaqedwa ngekhulu le-XNUMX futhi iyisakhiwo esikhulu nesinhle sesitayela samaGothic lapho, ngemuva kokwakhiwa kwaso, kwangcwatshwa izinsalela noma izinsalela zosanta waseFrance, iSaint-Denis.
Futhi uma sikhuluma ngomlando wenkolo impi ebalulekile phakathi kwamaKatolika namaProthestani yenzeka kula mazwe ngo-1567, eyokuqala eyaphumelela futhi ekugcineni yaphela lapho kuguqukela eNkosini uHenry IV yobuKatolika.
Kamuva i-abbey necropolis yaba yindawo yokuphumula yaphakade yamakhosi aseGallic owokugcina ukungcwatshwa kwakhe ebukhosini kwakunguLouis XVIII ngo-1824. Ngokunyamalala kobukhosi, le ndawo yaseParis yalahlekelwa yinkazimulo yayo kodwa kancane kancane yaqala ukufakwa emadolobheni, yenziwa izimboni futhi yathuthukiswa.
Izakhamizi zayo zasuka ekubeni ngabalimi zaya kubasebenzi ngakho-ke ekuqaleni komzabalazo wobusoshiyali iSaint-Denis yaba isikhungo sezepolitiki esibalulekile futhi ubusoshiyali baba nokunqoba kwayo kokuqala kwezepolitiki lapha ngalokho waziwa ngokuthi la idolobha red noma iRed Villa.
Ungafika kanjani eSaint-Denis
USaint-Denis unjalo isigamu sehora ukusuka enkabeni yeParis futhi izindlela zokuhamba ezibasebenzelayo yilezi tram, metro, RER kanye I-Transsillien. Kunesiteshi sesitimela saseSaint-Denis esivela maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye bese kuthi enye yezindlela zokuhamba engiziqambe ngegama zibe neziteshi eziningana endaweni.
Uma uthatha i- Umugqa weMetro 13 unesiteshi se-Université, isiteshi seCarrefour, iPorte de Paris esiseduze kakhulu neStade de France kanye nesiteshi saseSaint-Denis Basilica, isibonelo.
Yini ongayibona eSaint-Denis
ISaint-Denis yinto yamasiko amaningi ozoyibona eParis. Lapha bukhoma Ama-Afrika, amaKurdish, amaPakistan, ama-Algeria, amaShayina, amaTurkey, amaNdiya nezinye eziningi. Abanye babo abanayo imibhalo noma imvume yokuba sezweni kepha bakhona, bahlala futhi basebenza eFrance. Futhi abaningi, abaningi bazalelwa lapha kubazali bangaphandle.
Uma ubuza izinhlangano zezivakashi, lena indawo lapho kuphoqelekile ukuthi uqaphele ngoba izidakamizwa nobugebengu kuyajikeleza. Uma usafuna ukuyithola, khona-ke uthatha izithuthi zomphakathi bese uchitha intambama uzulazula.
Saint-Denis yisibuko seParis yanamuhla, indlalifa yekoloniyaliyali yakudala yaseFrance, kepha kulabo baphendukela emfashinini esikhathini esithile ingxenye isiphenduke indawo okuyiwa kuyo hipsters y onxiwankulu Abantu baseParis abanesifiso sokungajwayelekile.
ISaint-Denis isigamu sehora ngesitimela ukusuka enkabeni yeParis nanamuhla kwabaningi iyindawo eyingozi kakhulu enhlokodolobha yaseFrance. I-Multiculturalism, lapho amaSulumane eningi khona, isesweni lesiphepho futhi abaningi besaba ukuthi kuzoba yindawo yokuzala amaphekula azayo.
Imigwaqo yasedolobheni ihlelwe ngendlela enkulu ebizwa ngokuthi URue du UFarbourg Saint-Denis lapho i- izitolo nezindawo zokudlela lapho ungajabulela khona izitsha zaseNdiya, zasePakistan noma zase-Afrika. Kukhona nabathengisi abaningi basemgwaqweni, okunikezwayo kokumemeza, okwenza umsindo.
Omunye umgwaqo onconyelwe ukuhamba ngezinyawo yi street UMontorguiel, nge izindawo zokudlela nezindawo zokudlela ezinhle i-bohemian, nabantu abafundayo Okwezwe kepha futhi nabantu bayo yonke imvelaphi yobuzwe engaba khona. Futhi noma ngabe bekungeyona iParis ukube awekho amathikithi, kunjalo.
Ingabe i- ndima Abancane Ezomnotho, emoyeni futhi kugcwele izihlahla, lapho kuhlala kuvulwa khona izindawo zokudlela, imigoqo nezindawo zokudlela ezinhle nokuthi njalo ngoLwesibili ngehora lesi-7 kusihlwa kuyindawo yomhlangano yabalimi abaphilayo abathengisa imikhiqizo yabo.
El ndima I-Brady Yindinyana ebukekayo, efulelwe ngengilazi, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX, elibukeka njenge-Little India. Enye indinyana ithi el ndima IPrado, emise okwehlamvu u-L, enophahla lwengilazi nemidwebo yobuciko ye-art-nouveau.
Isango iSaint Denis liyi-arch yokunqoba eyakhiwe nguCarlos V yabhidlizwa nguLuis XIV lapho amakhosi ayethweswe imiqhele eBasilica eSaint-Denis angena eParis. Ekupheleni kweminyaka yama-80 yakhiwa kabusha emisebenzini eyathatha iminyaka eyishumi yonke: amamitha angama-25 ukuphakama, amamitha ayisihlanu ububanzi nokukhululeka okuhle.
Vele i- I-Basilica Saint-Denis kungukuheha okukhulu. I-abbey yangenkathi ephakathi ibaluleke kakhulu emlandweni nasekwakhiweni kwezakhiwo. Cishe yabhidlizwa ngokuphelele ku-French Revolution kwazise imele ubukhosi futhi yibandla kuphela elasala limile ngoba konke okunye, izithombe ezibaziwe, i-abbey, amathuna, konakele.
Ngenkathi kuyi-necropolis yangempela namuhla sekusele amathuna asebukhosini kuphela kwamaningi ayazi ukuthi angaba nawo ngoba ngokuhamba kwesikhathi kanye nezinxushunxushu zezepolitiki amathuna amaBourbons, iValois, iPlantagenet avulwa, abhujiswa noma alahleka noma adluliselwa emangcwabeni amakhulu ngaphandle kwemvumelwano noma isizathu.
UBonaparte uvule kabusha isonto futhi akazange awathinte amathuna amakhulu. Ngo-1817 amaBourbons ayalela ukuba awavule, yize athola okuncane. Okusele kwezidumbu eziyi-158 zezindlovukazi namakhosi kwafakwa ebhokisini lomngcwabo lapho kufihlwa khona isonto elinamabala emabula anamagama awo.
Uma uvakashela isonto uzobona konke lokhu kanye ne-crypt ekhethekile yamaBourbons lapho izinsalela zazingcwatshwa khona ULouis XVI nomkakhe uMarie Antoinette wase-Austria Kuphela ngonyaka we-1815. Uzobona namathuna amanye amakhosi, izindlovukazi nezikhulu, ezinye zazo zilethwe kwezinye izigodlo nasemasontweni.
Yakhiwa kabusha ngekhulu le-XNUMX ngumakhi ofanayo owabuyisela i-Notre Dame Cathedral.
Impilo yasebusuku eSaint-Denis
Uma ungakuthandi ukungavikeleki kwamadolobha amakhulu, akuwona umqondo omuhle ukuvakashela iSaint-Denis ebusuku., ngaphandle uma uhamba ngeqembu, khuluma kahle isiFulentshi noma ube nabangane lapha. Uma kunjalo, indawo yakhona ilungele ukulala ubusuku obubodwa.
Uyayithanda i- nightlife impimpi yakhe? Ngakho-ke nansi i-mecca yakho at Jeannette, indawo okungenani eneminyaka engamashumi ayisihlanu ubudala kodwa ithandwa ngabantu abasha namuhla. Udla ukudla kwaseFrance, kunezibuko zekhulu le-XNUMX namatafula e-Retro Formica.
Okuphikisanayo yi Mauri 7, ibha enezindonga zangaphakathi ezihlotshiswe ngezembozo zamarekhodi e-LP namanye amatafula atholakala ePassage Brady. Kunjalo futhi Sully futhi i castle ka-Au, kepha imigoqo eminingi nezindawo zokudlela ezinhle ziya ngokwanda njengamakhowe ngemuva kosuku lwemvula nomswakama.
Njengoba ubona, ISaint-Denis yindawo ecebile nehehisayo eParis. Okuthile inhlokodolobha yaseFrance eyabelana ngakho ngokwandayo nezinye izihloko zaseYurophu kuyichaza, inkcubeko eminingi, kepha uma uthanda ukunotha kwamasiko, kuyakucebisa futhi kukufundise, kungukuhamba okungafanele ukuphuthe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » EFrance » Isifunda esimangazayo saseSanta Denis eParis
Sawubona futhi ngiyabonga kakhulu ngolwazi,
Ngicabanga ukuthi uhlanganisa izindawo ezimbili ezihlukene ku-athikili efanayo, zombili ezesifunda se-dele de France.
Owokuqala walokhu, impela, umasipala waseSaint Denis (ongaphandle kweBoulevard Périphérique ngakho-ke ungaphandle kwalokho okubhekwa njengesikhungo seParis, esinezindawo zayo ezingama-20). Yilapho i-Cathedral ingatholakala futhi itholakala kalula ngenxa yomugqa we-metro 13. Njengoba kushiwo futhi, ingenye yezindawo ezinamasiko amaningi ngenxa yokufuduka.
Ngakolunye uhlangothi, sinendawo ezungeze isiteshi sesitimela esibizwa ngeStrasbourg-Saint Denis (ulayini 8, 4 no-9), lapho singathola khona i-arch esithombeni kanye nezindawo zokudlela zamaNdiya ePassage Brady. Kodwa-ke, le ndawo iphakathi nendawo neParis, futhi itholakala phakathi kwezifunda 2 no-10, ngaseRépublique.